Ngabe Abakhangisi Kufanele Bayeke Ukwenza Okwenziwe Umuntu? | Martech Zone
Ngabe Abakhangisi Kufanele Bancame Ekwenzeni Okwakho?
NgeSonto, ngoMashi 29, 2020 NgeSonto, ngoMashi 29, 2020 UGarin Hobbs
I-athikili yakamuva yeGartner ibike:
Ngo-2025, ama-80% wabathengisi abatshalile imali ekwenzeni ngezifiso zabo bazoyishiya imizamo yabo.
Ukubikezela i-2020: Abakhangisi, Akukhona Lokho Nje Okukuwe.
Manje, lokhu kungabonakala kungumbono we-alarmist, kepha okushodayo ngumongo, futhi ngicabanga ukuthi yilokhu…
Kuyiqiniso elifanelekile jikelele ukuthi ubunzima bomsebenzi bulinganiswa maqondana namathuluzi nezinsizakusebenza onazo. Isibonelo, ukumba umsele ngethisipuni kungokuhlangenwe nakho okubuhlungu kakhulu kunokubuyiselwa emuva. Ngendlela efanayo, ukusebenzisa amapulatifomu wedatha aphelelwe yisikhathi, kanye nezixazululo zokuthumela imiyalezo ukushayela isu lakho elenziwe ngezifiso kubiza kakhulu futhi kunzima kunokuba kudingeka. Leli phuzu libukeka lisekelwa iqiniso lokuthi, lapho bebuzwa, abathengisi bacaphune, ukuntuleka kwe-ROI, izingozi zokuphathwa kwedatha, noma zombili, njengezizathu zabo eziyinhloko zokuyeka.
Akumangazi. Ukwenza ngezifiso kunzima, futhi izinto eziningi zidinga ukuhlangana ku-symphony ukuze zenziwe zombili ngempumelelo nangempumelelo. Njengakwezici eziningi zebhizinisi, ukwenziwa ngempumelelo kwecebo lokumaketha kuza ezimpambanweni zezinto ezintathu ezibucayi; Abantu, Inqubo, Nobuchwepheshe, kanye nobunzima buvela lapho lezo zingxenye zingakwazi — noma zingakwazi — ukuhambisana.
Ukwenza kube ngokwakho: Abantu
Ake siqale nge Abantu: Ukwenza ngezifiso okunenjongo futhi okusebenzayo kuqala ngokuba nenhloso efanele, ukubeka ikhasimende enkabeni yendaba ebalulekile. Alikho inani le-AI, i-analytics yokubikezela noma i-automation engathatha isikhundla sento ebaluleke kakhulu kwezokuxhumana: EQ Ngakho-ke, ukuba nabantu abalungile, abanomqondo ofanele, kuyisisekelo.
Ukwenza kube ngokwakho: Inqubo
Okulandelayo, ake sibheke Inqubo. Inqubo ekahle yomkhankaso kufanele icabangele izinhloso, izidingo, okokufaka, kanye nezikhathi zomhlanganyeli ngamunye, futhi kuvumele amaqembu ukuthi asebenze ngendlela athembeke ngayo, anethezeke futhi asebenze kahle ngayo. Kepha abathengisi abaningi kakhulu baphoqeleka ukuba bahlehle, bathole ukuthi izinqubo zabo zikhawulelwe futhi zilawulwa ukushiyeka kwamathuluzi abo wokuthengisa nezingxenyekazi. Inqubo kufanele isebenzele iqembu, hhayi enye indlela ezungezile.
Ukwenza ngezifiso: Ubuchwepheshe
Okokugcina ake sixoxe ngakho Ubuchwepheshe. Amapulatifomu akho wokumaketha kanye namathuluzi kufanele abe yi-fulcrum yokunika amandla, iphindaphinde yamandla, hhayi into enomkhawulo. Ukwenza ngezifiso kudinga ukuthi abathengisi ukwazi amakhasimende abo, futhi ukwazi amakhasimende akho adinga idatha… idatha eningi, evela emithonjeni eminingi, eqoqwe futhi ivuselelwa ngokuqhubekayo. Ukuba nedatha nje akwanele. Yikhono lokufinyelela ngokushesha futhi lihlunge imininingwane engenzeka kusuka kudatha evumela abathengisi ukuthi bathumele imiyalezo eyenziwe yaba ngeyakho egcina ijubane nokuqukethwe kokuhlangenwe nakho kwamakhasimende kwanamuhla.
Eziningi ezaziwa kakhulu futhi ethembekile amapulatifomu alwela ukuhlangabezana nezidingo ezikhulayo ezinselela umthengisi wanamuhla. Idatha egcinwe kuzakhiwo ezindala zamathebula (ezobudlelwano noma ngenye indlela), inzima kakhulu ngokwemvelo (futhi / noma iyabiza) ukugcina, ukukala, ukuvuselela kanye nokubuza kunedatha ezakhiweni ezingezona ezamathebula, njengamalungu afanayo.
Amapulatifomu amaningi wokuthumela imiyalezo asebenzisa i-database esekwe ku-SQL, edinga ukuthi abathengisi bazi i-SQL, noma babaphoqe ukuthi bayeke ukulawula imibuzo yabo nokuhlukaniswa kwabo nge-IT noma i-Engineering. Okokugcina, lezi zingxenyekazi ezindala zivamise ukuvuselela idatha yazo ngama-ETL asebusuku futhi zivuselele, zikhawulele amandla abakhangisi bokuletha imiyalezo efanele futhi efike ngesikhathi.
Ngokuphambene, amapulatifomu wanamuhla afana I-Iterable, sebenzisa ukwakheka kwedatha kwe-NoSQL okusabekayo, okuvumela ukusakazwa kwedatha yesikhathi sangempela nokuxhumeka kwe-API kusuka emithonjeni eminingi ngasikhathi sinye. Ukwakheka okunjalo kwedatha kushesha ngokwengeziwe ukuhlukaniswa futhi kulula ukufinyelela kuzinto zokwenza ubuwena, kunciphisa kakhulu izindleko zesikhathi namathuba okwakha nokuqalisa imikhankaso.
Zakhiwe kamuva nje kunezimbangi zazo eziqashiwe, iningi lala mapulatifomu futhi afaka ngokwendabuko noma asekele iziteshi eziningi zokuxhumana, ezinjenge-imeyili, i-push yeselula, i-in-app, i-SMS, i-browser push, i-retargeting yomphakathi kanye ne-imeyili eqondile, inika amandla abathengisi ukuletha kalula ukuqhubeka kokuhlangenwe nakho okukodwa njengoba abathengi behambisa ulwazi lwabo kuziteshi zomkhiqizo nakuma-touchpoints.
Ngenkathi lezi zixazululo zinganciphisa ijika lokuthuthuka kohlelo futhi zinciphise isikhathi senani lokumaketha, ukutholwa kuye kwehla kancane phakathi kwemikhiqizo emikhulu noma emide, ngokwesiko evikela kakhulu futhi engafuni ubungozi. Ngakho-ke, iningi lenzuzo seligudluzele kumikhiqizo emisha noma evelayo ethwala imithwalo encane kakhulu yobuchwepheshe befa noma ngokomzwelo ukuhlukumezeka.
Abathengi akunakwenzeka ukuthi badedele okulindelwe kwenani, lula kanye nesipiliyoni noma kunini. Eqinisweni, umlando usifundisa ukuthi lokho okulindelwe kungenzeka kukhule kuphela. Ukushiya isu lakho lokwenza kube ngokwakho akunangqondo emakethe eminyene, ngesikhathi lapho ulwazi lwamakhasimende ngokusobala luyithuba elihle kakhulu lomthengisi lokuletha nokuhlukanisa inani lomkhiqizo wabo, ikakhulukazi njengoba kunezindlela eziningi ezikhona ezingatholakala.
Nazi izibopho ezinhlanu abathengisi nezinhlangano zabo abangazenza ukubasiza ngokuziphendukela ngempumelelo:
Chaza ifayela le- Okuhlangenwe nakho ufuna ukuletha. Makube lelo iphuzu lekhampasi lakho konke okunye.
Vumelana ngokuthi ushintsho luyadingeka futhi yenza kuwo.
Hlola izixazululo ezingaba zintsha noma zingajwayeleki.
Thatha isinqumo sokuthi umvuzo komphumela mkhulu kunezingcuphe ezibonakalayo.
Vumela abantu bachaze ifayela le- inqubo; vumela inqubo ibeke izidingo zobuchwepheshe.
Abathengisi babe ukumba umsele, kepha awuwenzi babe ukusebenzisa isipuni.
Cela iDemo Engashintsheki
Tags: kuyamangazaukwenza ngezifiso ukumakethaukuzenzelaukwenza ngezifiso ukuthengisa
Garin unguMqondisi weDeal Strategy ku I-Iterable, ipulatifomu enika amandla abathengisi be-B2C ukulawula isu labo lokuthumela imiyalezo esiteshini ngokusebenzisa imodeli yedatha eguquguqukayo futhi esabekayo yokwazisa ishaneli engu-1: 1 ingxoxo nge-imeyili, iselula, iwebhu neziteshi zenhlalo.
i-vidREACH: Ipulatifomu Yevidiyo Ye-imeyili Yokucabanga Ngokulindela
Ukuqhamuka kwe-COVID-19: Umthelela Wokukhangisa Nokumaketha